Odayaasha gobolka Gedo oo cambeeray dilal ay geysteen Ahlu Sunna | raascasayrmedia.com
← Iska dhagatirida Faroole Rabitaanka Shacabka Raascasayr Maxay keeni kartaa?
Tahniyad Dhalasho →
March 26, 2011 · 11:25 pm
Odayaasha gobolka Gedo oo cambeeray dilal ay geysteen Ahlu Sunna
Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada Balad Xaawo ee gobolak Gedo ayaa cambaareeyay dilal qorsheysan oo ay sheegeen in ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna Waljamaaca ay u geysteen deegaano ka tirsan gobolka Gedo.
Odayaashaani iyo waxgaradkaani ka soo jeeda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo Shabelle la soo xariiray islamarkaana diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa cabasho ka muujiyay dilal maalmihii u dambeeyay ka soo cusboonaaday degmada Balad Xaawo.
Waxa ay sheegeen odayaashaani in ciidamada Ahlu Sunna ee gacanta ku haya degmada Balad Xaawo ay bilaabeen dilal qorsheysan oo ay u geysanayaan dadka shacabka ah uu kusugan degmadaasi, iyagoo sidoo kale sheegay in siyaabo kala duwan saacadihii la soo dhaafay degmadaasi loogu dilay labo ruux oo mid ka mid ah uu 14 jir ahaa.
Odayaasha ayaa sheegay in loo baahanyahay in si deg deg ah wax looga qabto falalkaasi ay geysanayaan ciidamada Culumaa’udiinka ahlu Sunna Waljamaaca maadaama sida ay sheegeen intii halkaasi ay maamulayeen Al Shabaab aysan ka dhici jirin dilalkaasi.
Horay ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna Waljamaaca waxaa ay wacad ugu mareen in ay beegsan doonaan cida ay u arkaan in ay xariir dhow la leeyihiin xarakada Mujaahdiiinta Al Shabaab.